စည်းရုံးသိမ်းသွင်း စာစီစာကုံးရေးသားနည်း - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on May 8, 2013 at 9:45 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
၀င်ခွင့်စာမေးပွဲအားလုံးနီးပါးလိုပင် လျှောက်ထားသူ၏ အရေးစွမ်းရည်ကိုသာမက ကျိုးသင့်ကြောင်းသင့်ရှင်းပြနိုင်စွမ်း၊ တစ်ဖက်သားအား မိမိတင်ပြလိုသည်ကို စွဲဆောင်စည်းရုံးနိုင်စွမ်းကို တစ်ပြိုင်တည်းစစ်ဆေးနိုင်သည့်စာစီစာကုံး persuasive or argumentative writing တစ်ပုဒ်တော့ ဖြေဆိုရလေ့ရှိသည်။ In persuasive or argumentative writing, we try to convince others to agree with our facts, share our values, accept our argument and conclusions, and adopt our way of thinking. ဆိုသည့်အတိုင်း မိမိတို့ဆင်ခြေများ၊ ယုံကြည်သည့်အရာများ၊ တန်ဖိုးများ အာဘော်များ ကောက်ချက်များ၊ စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းများအား သူတစ်ပါးလက်ခံလာအောင် ရေးသားရသည်။ ၄င်းစွမ်းရည်သည် ကျောင်းဝင်ခွင့်ရရုံ စာမေးပွဲအောင်ရုံ သာတန်ဖိုးရှိသည် မဟုတ်ပါ။ ၀န်ထမ်းအစ နိုင်ငံရေးသမားအဆုံး မရှိမဖြစ်အသုံးပြုရမည့် လူမှုစွမ်းရည်တစ်မျိုး ပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းရေးသားနည်းကို လေ့လာထားသင့်သည်။
a good persuasive essay စည်းရုံးသိမ်းသွင်းစာစီစာကုံးကောင်းတစ်ပုဒ်၏လက္ခဏာများ
establishing facts အချက်အလက်တည်ဆောက်ခြင်း
လူဆိုသည်မှာယုတ္တိတန်/မတန် ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်သည့် အဆင့်မြင့်သတ္တ၀ါဖြစ်သည်။ မိမိတင်ပြလိုသည့်အာဘော်ရောက်အောင် ခိုင်မာသည့် ကိန်းဂဏန်း၊ သုတေသန၊ ရည်ညွှန်းအကိုးအကားတို့အား သူ့နေရာနှင့်သူ ထည့်သွင်းအသုံးပြုမှသာလျှင် ပရိတ်သတ် နားလည်လက်ခံလာပေလိမ့်မည်။
clarifying relevant values ဆီလျော်သည့်တန်ဖိုးများကို စာဖတ်ပရိတ်သတ်နားလည် အောင်ရှင်းပြနိုင်ခြင်း
မိမိအမြင်၊ သူ့အမြင် နှိုင်းယှဉ်ကာမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရမည်။
prioritizing, editing, and/or sequencing ဦးစားပေးအထားအသို၊ နေရာချထားခြင်း
အထောက်အထားအချက်အလက်များအား လိုအပ်သလို အရေးကြီးမှု အနည်းဆုံးမှ အများဆုံးသို့လည်းကောင်း၊ အများဆုံးမှ အနည်းဆုံးသို့လည်းကောင်း စီစဉ်ထားတတ်ရမည်။ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ဇာတ်ရှိန်မြင့်တက်လာအောင်ထားသိုတတ်ရမည်။
forming and stating conclusions နိဂုံးကောက်ချက် တည်ဆောက်တင်ပြခြင်း
“ထို့ကြောင့် . . . ဤသို့သာဖြစ်သင့်ကြောင်း” မိမိ၏အမြင်ကိုတင်ပြတတ်ရမည်။
စာဖတ်ပရိတ်သတ်အား မိမိတင်ပြသည့်ကောက်ချက်များသည် အများလက်ခံထား သော ကျိုးကြောင်းသင့်အချက်အလက်များနှင့်တန်ဖိုးများအပေါ်တွင် အခြေခံထား ပါသည်ဟု နားလည်လက်ခံလာအောင် ဆွဲဆောင်တတ်ရမည်။
having the confidence ယုံကြည်ချက်ထားခြင်း
မိမိကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုမရှိသူတစ်ယောက်သည် အခြားသူတစ်ယောက်အား မည်ကဲ့သို့ဆွဲဆောင်နိုင်ပါမည်နည်း။ confidence ဖြစ်ဖို့ဆိုရာတွင် မိမိတင်ပြနေသည့် အကြောင်းအားကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ထားမှဖြစ်မည်။
စည်းရုံးသိမ်းသွင်း စာစီစာကုံးတစ်ပုဒ်ရေးရန် နည်းနာတစ်ချို့မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
Write out the questions in your own words. မေးခွန်းကိုကိုယ်နားလည်သလို ကိုယ့်ဘာသာပြန်ချရေးကြည့်ပါ။
ကိုယ်လုပ်ဆောင်ရန်ပေးထားချက်ထဲမှ မေးခွန်းများကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ စာရေးရန် လိုအပ်သည့် သုတေသနနှင့် ဖတ်မှန်ခြင်းများပြုလုပ်နေချိန်တွင်
ငြင်းခုံရမည့်အကြောင်းအရာတွင် မည်ကဲ့သို့ တစ်ဖက်သတ်ထင်မြင်ချက်များပါဝင်နေသလဲ။
စာရေးသူ၏ယူဆချက်ကိုမိမိဘယ်လိုထင်မြင်သလဲ။ စတာတွေကို မှတ်သားပါ။
List out facts
အချက်အလက်များကို စာရင်းပြုစုပါ။ အရေးကြီးလျှင်ကြီးသလို အစီအစဉ်နေရာချ၊ ဖြုတ်သင့်တာဖြုတ်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို “ဘာလိုသေးသလဲ” ဟူသည့်မေးခွန်းမေးပါ။
စိတ်ခံစားချက်သက်သက်နှင့်တုန့်ပြန်မှုတွေကို မှတ်ထားပါ။ တစ်ချိန်ပြန်အသုံးပြုနိုင် ပါလိမ့်မည်။
Start writingadraft! အကြမ်းအရင်စရေးကြည့်ပါ။
မိမိစိတ်ထဲရှိတာအရင်ချရေးကြည့်ပါ။ ဒီအချိန်တွင် သဒ္ဒါစည်းမျဉ်း၊ စာလုံးပေါင်းများကို အာရုံထဲသိပ်မထည့်ပါနှင့်။
တစ်ခါတင်ပြလျှင် အချက်အလက် သုံးခုတင်ပြသည့်စံနစ်ကိုကျင့်သုံးပါ။ (သုံးခုထက်ပိုများလျှင်စာဖတ်သူအာရုံထဲရောက်ဖို့မလွယ်ပါ။)
နိဂုံးချုပ်လျှင် တင်ပြခဲ့သမျှကို အတိုချုံးပြောပါ။ ပြီးလျှင် ဆက်စပ်ကာ “ထို့ကြောင့် . . . ဤသို့ဖြစ်သင့်သည်” ဟုကိုယ့်အာဘော်ကိုတင်ပြပါ။ နိဂုံးချုပ်စာကြောင်းသည် နိဒါန်းရှိ ပဓာနအာဘော်ကို ပြန်ထင်ဟပ်ပါစေ။ မိမိတင်ပြခဲ့သမျှသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျှော်မှု ရှိမရှိ ပြန်ဆန်းစစ်ပါ။
တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့် အကောင်းဆုံးသောစာကိုမရနိုင်ပါ။ အကြိမ်ကြိမ်ပြန်ဖတ်ရှုတည်းဖြတ်မှသာ တစ်ခါထက်တစ်ခါ တိုးတက်ကောင်းမွန်သောစာကိုရနိုင်ပါမည်။
အရေးမကြီးသယောင်ထင်ရသော်လည်း လက်တွေ့စာရေးသားနေသူများအတွက်အလွန် အသုံးဝင်သည့်နည်းစံနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ စာရေးသူတစ်ဦးအတွက် တစ်ချိန်နှင့်တစ်ချိန် ဈာန်ဝင်စားမှုမတူညီသည့်အတွက် တစ်ရက်နှစ်ရက်ပစ်ထားပြီး မှပြန်ရေးခြင်းဖြင့် မတူညီသောရှုထောင့်များရနိုင်ပါသည်။
မိမိရေးထားသည်ကို ပြန်ဖတ်ရှုပါ။ “အဓိပ္ပါယ်ရှိရဲ့လား။ စာဖတ်သူကကော လက်ခံပါ့မလား။ သူတို့ မိမိဆိုလိုသည်ကို နားလည်ပါ့မလား” စသည်ဖြင့် မိမိကိုယ်ကိုမေးခွန်းထုတ်ပါ။
လိုအပ်သလို အကြိမ်ကြိမ်တည်းဖြတ်၊ ပြင်ဆင်ပါ။
persuasive ဆိုသည့်အတိုင်း အငြင်းပွားဖွယ်ကိစ္စများကို ဆွဲဆောင်ရလေ့ရှိသဖြင့် မိမိရပ်တည်ချက်ကို ဝေဖန်မှုများနှင့်မလွဲမသွေရင်ဆိုင်ရပေလိမ့်မည်။ ၄င်းဝေဖန်မှုများသည် မိမိအားနည်းချက်ကို ထောက်ပြသည်ဟုသဘောထားပါ။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှိပ်ကွပ်မှုဟု ဘယ်တော့မှသဘောမထားပါနှင့်။
မိမိတင်ပြသည့်အချက်အလက်များအား ဝေဖန်ခံရပါက သေသေချာချာပြန်စစ်ကြည့်ပါ။ ကိုးကားစရာများကို ကိုးကားပါ။
တစ်ခါတစ်ရံမိမိတန်ဖိုးထားသည့်စံနှုန်းများအား ဝေဖန်ခံရပါက ခံနိုင်ရည်ရှိအောင်လေ့ကျင့်ပါ။ သူတပါးကိုဆွဲဆောင်မည့်သူသည် မိမိကလည်း သူတစ်ပါး၏အမြင်များမှသိမ်းသွင်းမှုကို လက်ခံကြောင်းပြသပါ။
Permalink Reply by Yin Min Myint Z∂w on May 9, 2013 at 22:44
Permalink Reply by than zaw oo on May 10, 2013 at 11:42
Permalink Reply by Mya Thet Oo on May 10, 2013 at 11:47
Permalink Reply by Ratan Biswas on May 10, 2013 at 15:35
Permalink Reply by than win on May 10, 2013 at 16:38
And I would like to request you to describe by example paragraph.
Permalink Reply by AYE AYE MAW on May 10, 2013 at 19:11
Permalink Reply by thanthansoe on May 11, 2013 at 11:20
Permalink Reply by swezinlatt009 on May 12, 2013 at 17:54
Permalink Reply by swezinlatt009 on May 12, 2013 at 17:55
Sir,Thank you for English study.
Permalink Reply by sikedeveechan on May 16, 2013 at 1:17